Didim-Pitsarana Indiana Manome Vahana Ireo Zo Ara-poko Mikasika Ny Drafi-Pitrandrahan’ny Vendata · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2013 6:00 GMT
Nanomboka efa tany amin'ny taona 2004 ny fifanoherana mikasika ny fitrandrahana bauxite, ary napetraka ny fanentanana iraisam-pirenena iray ho fanoherana ny drafitry ny Vedanta. Nolavin'ny Fitsarana Ambony ny fangatahana napetrak'ilay orinasa hanesorana ny fandraràna mikasika ny fitrandrahana, ary nandidy fa filan-kevitra roa, na gram sabhas, no tsy maintsy mamaly ao anatin'ny telo volana raha tiany na tsia ny hanatanterahana azy.
Monina amin'ny faritra avo amin'ny tendrombohitr'i Niyamgiri ny Dongria Kondh ary manindrahindra ny tendrombohitra sy ny ala ho zava-masina toa Andriamanitra. Ny tendro avo indrindra, izay anisany ao anaty faritra tadiavina hotrandrahana, no fitoeran'ny andriamanitra tompoin'izy ireo ho masina indrindra, Niyam Raja.
Naneho hevitra momba ilay didim-pitsarana ila mpandinika ny tontolo iainana Sunita Narain (@sunitanar) :
@sunitanar: Fiarovana tontolo iainan'ny mahantra ny fitsarana ny Vendata. Fandalinana ny làlan'ny demaokrasia hizorana mankany amin'ny firoboroboana maitso. Tsy maintsy arahabaina.
Saingy ny mpanao gazety iray, Prayaag Akbar (@unessentialist), tsy rototra mikasika ny fomba nitaterana ilay didim-pitsarana:
@unessentialist: Tsy hanapa-kevitra ny olo-masin'ny foko, Times of India, ny gram sabha no hanao. Noho izany ajanony ny esoesonareo. Tatitra mampivarahontsana
Mandeha ny feo fa ny governemantan'i Odisha sy Vedanta ankehitriny dia eo ampanosehana ny fanapahan-kevitry ny sabha gram mba hankany amin'ny fahafahana mitrandraka bauxite. Ny 22 May, famoriana sy fivoriana ny fokonolon'i Dongria Kondh no natao tao Munikhol distrikan'i Rayagada, taorian'ny diabe iray naharitra dimy andro. Nitatitra tao amin'ny CGNet Swara ny mpanao gazety Litu Minj fa tapa-kevitra ny tsy manome alalàna orinasa na iza na iza hitrandraka ny havoanan'i Niyamgiri ireo mponina any.
Ny lahatsary fohy nakarin'i KBKNEWS tao amin'ny YouTube dia mampiseho ireo Dongria Kondh any Niyamgiri mankalaza ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Avo.: